ပါမောက္ခ Coovi Gomez မှအာဖရိကန်ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှု - Afrikhepri Fondation
တနင်္လာနေ့, မတ်လ 8, 2021
Lလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ထောင်စုနှစ် (ဖာဒင်ဗင်ဒေါ့ဖ်၊ ဘရုစ်ဝီလျံ၊ Damiano APPIA) ၏နောက်ဆုံးကာလတွင်ဖာရောဘုရင်၏အီဂျစ်ပြည်တွင်ယဉ်ကျေးမှုပေါ်ပေါက်လာရန်အခြေအနေများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းခဲ့သောရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များသည်ယခုအခါဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်တညီတညွတ်တည်းရှိနေကြသည်။ ခေတ်သစ် Nubia တွင်အဓိကနည်းပညာပြောင်းလဲမှုများကြောင့်အီဂျစ်အထက်ပိုင်းတွင်ပထမအကြိမ်လူမှုရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအင်စတီကျူးရှင်းများပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး Nechen ရှိ Abydos၊ Ta Seti ၏ကျော်ကြားသော NOME အထိဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေတွင်ဖာရာ - UNIFIER NARMER (-3300) မတိုင်မီမျိုးဆက်များစွာသည်ထင်ရှားသော SHEMSOU HOR ("SUIVANTS D'HORUS") မင်းဆက်မင်းဆက်သမိုင်းဝင်တီထွင်မှုများအတွက်လူသားအားလုံးအကြွေးတင်နေသည်။ သိသာထင်ရှားသော (ဘုရားသခင့်မူပိုင်၊ အရုပ်စာအရေးအသား၊ architectureရာမဗိသုကာ၊ နက္ခတ္တဗေဒပြက္ခဒိန်၊ တရားဝင်ကုဒ်များ) ။
ဤခေတ်မတိုင်မီကအခြေချနေထိုင်မှု၏အခက်အခဲမှာရှေးဟောင်းသုတေသနအကြွင်းအကျန်များဖြစ်သည့် Flinders PETRIE နှင့် AMELINEAU တို့မှ ANU များမှကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၅ ခုထောင်စုနှစ်အတွင်း NUBIA ၏သမိုင်းမတိုင်မီယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဒေသ၏ယဉ်ကျေးမှုများအကြားအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်တူညီမှုများကိုကျော်လွှား။ မရပါ။ ကွန်ဂိုမြစ်ဝှမ်းဒေသရှိအာဖရိကကြီးများမှတောင်အာဖရိက၏နယ်စပ်အထိဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤများပြားလှသောရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအာဖရိကရှိကျောက်တုံးအနုပညာစင်တာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမှရရှိသောထူးခြားသည့်ပေါင်းစည်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းရမည်။ ဂရိယဉ်ကျေးမှုစာရေးဆရာများနှင့် Melanoderms ၏ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မျက်မြင်သက်သေများမှမျက်မြင်သက်သေများအားယေဘူယျအားဖြင့် PREHELLENS နှင့် KRTTOIS တို့၏ဒုတိယထောင်စုနှစ်အတွင်းကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အထူးသဖြင့် CRTTOIS များအပေါ်အထူးအလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ (HERODOTE, Euterpe, စာအုပ် II၊ ၁၀၄ ကိုကြည့်ပါ) ။
အမှန်မှာ၊ ဂရိသမိုင်းမတိုင်မီဥရောပသမိုင်းကိုနူဘီးယားနှင့်ဖာရိုအီဂျစ်မှနူရို - အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုများအကြားရှိနီးကပ်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသောလက်ရှိဥရောပသမိုင်းပညာရှင်များကတမင်တကာဖုံးကွယ်ထားသည် ဂျင်းဗားကူတာ (အီဂျစ်နှင့်ကြိုတင်ပြောဆိုထားသည်များကိုကြည့်ပါ) ထင်သည့်အတိုင်းရိုးရှင်းသောကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် NUBIA နှင့်ရှေးခေတ်အီဂျစ်မှကြီးမားသောပံ့ပိုးမှုများ ဗိသုကာ, အနုပညာ, အညွှန်းနှင့်ဘာသာတရား၏လယ်ပြင်၌တည်၏။
ဒီအစဉ်အလာအရ NEGRO-AFRICAN CIVILIZATIONS သည်ဥရောပတွင် PREHELLENES ၏မြင့်တက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုရှင်းပြသည်မှာရိုင်းစိုင်းသောကျူးကျော်မှုနှင့်ဒိုရီယန်များမှ Mycenaean ယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးခြင်းမတိုင်မီအထိဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်သမိုင်းဝင်အရင်းအမြစ်များမှခရိကျွန်းယဉ်ကျေးမှုကိုယ်နှိုက်သည်ဘီစီ ၁၂ ရာစုအတွင်းရှိ“ ပင်လယ်တောင်များ” ကျူးကျော်သည့်အထိအီဂျစ် - နူဘီးယန်းယဉ်ကျေးမှု၏လွှမ်းမိုးမှုကိုပြတ်ပြတ်သားသားလွှမ်းမိုးခဲ့သည် (cf Cheikh Anta DIOP "CIVILIZATION OR BARBARY") ။
ဒီသမိုင်းဝင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် PLATO မှတင်ပြသောကျော်ကြားသော“ ဒဏ္MYာရီအတ္တလန္တိတ်” အားမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတွင်တည်ရှိသည့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစေသည်။ အင်ဒို - ဥရောပလူမျိုးများသည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမြှင့်တင်ရေးကိုသာခံစားရမည် IL -AD (-800 နှင့် -750 အကြားရေးစပ်) နှင့် (ဘီစီ ၈ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်ရေးစပ်ခဲ့သည့်) ILISAD တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော HOMERIC EPICs ၏သွင်ပြင်နှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်ဒဏ္legာရီတစ်ဝက်ကာလအတွင်း။ ဤရွေ့ကား EPICS နှုတ်ဖြင့်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်နှင့်အိုင်တီ PISISTRATE စာရေးသား ILIAD အတွက်ဥပမာအဘို့တည်သော VITH ရာစု၌သာရှိ၏။
အလားတူပင်၊ ၎င်းသည် EGYPT ၏အာရှသြစတြေးလျဂရိနှင့်အထူးသဖြင့် IONIA City အပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဥရောပနိူင်ငံနိဒါန်းတွင် THALES DE MILET ၏နိဒါန်းကိုနားလည်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ “ SACRED SCIENCE” ၏အီဂျစ်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်သူလေ့လာခဲ့သောခရီးသည်ဂရိနိုင်ငံတွင်ကျင့်သုံးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ စွဲချက်တင်ထားသော“ ဂရိဂရိအံ့ဖွယ်” ၏ကြားခံ၏ PRESOCRATIC အားမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲထားသောအတွေးအခေါ်များကို EGYPT မတိုင်မှီပထမဆုံးအကြိမ်ချေးယူခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်း၊ denatured ။ PLATO နှင့် XENOPHON တို့မှပြန်လည်အမှတ်တရပြန်ပြောပြခြင်းအငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်မသေနိုင်ဟူသောအယူအဆမှ စတင်၍ ထင်ရှားသော "ရှေးဟောင်းအစဉ်အလာ" သည် ဆိုကရေးတီး၏အတွေးအခေါ် (cf. LE PHEDO) သည်မူလရင်းမြစ်ဖြစ်သည့် EGYPT နှင့်ရှင်းလင်းစွာဆက်စပ်နေသည်။ N, ZENON D'ELEE, အရစ္စတိုတယ်စသည်တို့သည်ရှေးခေတ်အီဂျစ်အားအသိအမှတ်ပြုထားသောအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာအသိပညာအတွက်အကြွေးတင်နေသည်။ Illustrated အတွေးအခေါ်များ၏ CENACLE တွင်ခေတ်နောက်ကျသွားသောအချိန်တွင်ဥရောပသည်နောက်တဖန်ဆွဲရန်ပျက်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ။ အလက်ဇန္ဒြီးယားမှ၎င်း၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးဘို့လိုအပ်သောအသိပညာ။
ဤ "နိုင်းမြစ်၏ထောင်စုနှစ်ပညာ၏ ACHARNE တီထွင်မှု" နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောဘာသာရေးနှင့်အတွေးအခေါ်ရေစီးကြောင်းများ (cf Luciano CANFORA "ALEXANDRIAN LIBRARY OF DESTRUCTION)) သည်သိပ္ပံပညာသည်ယခုအချိန်တွင်အတော်အတန်တိုးတက်လာသည်။ ငါတို့ခေတ်မတိုင်မီ 350 ကနေ SAMOS ၏ ARISTARCHUS အားဖြင့်အီဂျစ်နက္ခတ္တဗေဒအသိပညာ၏ဖမ်းယူခြင်းဖြင့်အခြားသူများအကြားသက်သေပြခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအာဖရိကနှင့်အာဖရိကန်မှဆင်းသက်လာသူများသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သောပါမောက္ခ Cheikh Anta DIOP ၏ထောက်ခံချက်ကိုစုပေါင်းလိုက်နာရန်အချိန်ကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ သွားချင်သွားအောင်သွားပါ၊ ငါတို့နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ရသည့်အာဖရိက၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုလုယက်သိမ်းယူသူများ၏လက်ထဲမှဖြတ်ပစ်လိုက်သည်” (cf. Théophile OBENGA) ။
Jean-ချားလ်စ် Coovi ဂိုမက်ဇ
€7ကနေ 15,20 အသစ်
5 14,90 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
နောက်ဆုံးမတ်လ ၁ ရက်၊
Tyana မှ Apollonius သည်စစ်မှန်သောခရစ်တော်ဖြစ်ခဲ့သလော။